Waxaa Daqiiqado yar kahor Isgooska KM-4 ee Magaalada Muqdisho ka dhacay Weerar Ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaah qarxa laga soo buuxiyay sida aan Wararka ku heleyno kaa ee kasoo baxayaan warar kala duwan cida lala eegtay.
Goob joogayaal kusugan Isgooska KM-4 ee Magaalada Muqdisho ayaa noo sheegay in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday Weerarka Ismiidaaminta ah , waxaana Wararka hordhaca ah aan heleyno sheegayaan in gaarigaasi lala eegtay gawaari kale oo marayay Isgooska KM-4 gaar ahaan gaari ee wateen Shaqaalo Turki ah.
Lama hayo Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxaya Weerarka Ismiidaaminta ah ee goordhaw dhacay , waxaan goobta daadsan dad ku dhintay iyo ku dhaawacmay Weerarka Ismiidaaninta ah, dadka dhaawacyada soo gaaray ayaa halkaasi waxaa ka qaadaya gawaarida Amplaasta.
Ciidamada Dowlada ayaa durba xiray goobta uu weerarka Ismiidaaminta ah ka dhacay waxaana la maqlayaa Mararka qaar rasaas dhaceysa ee ciidamada Ridaydaan , mana jiraan Faah faahin ilaa hada laga helayo qaabka ee wax u dhaceen iyo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.
Xafiiska Shabakada salaabmedia